I-Apple Pay akhawunti ye-90% yeentlawulo ezenziwe ngaphandle kokunxibelelana | Ndisuka mac
Intlawulo nge-Apple Pay ngoku ineminyaka emi-3 ubudala kwaye kuyinyani ukuba sikulo mzuzu xa, ubuncinci kwilizwe lethu, abasebenzisi beebhanki ezininzi bebona indlela inkonzo ehambelana ngayo kwaye bangaqala ukuyisebenzisa. Kodwa ngaphambi kokuba kwenzeke oku I-Apple Pay iyaqhubeka nokuba yinkonzo yokuhlawula ngaphandle konxibelelwano nepesenti ephezulu yeentlawulo.
Kuya kufuneka icaciswe ukuba olu hlobo lokuhlawula belusele lukhona ngaphambi kokuba iApple isungule inkonzo yayo, kodwa kude kube lelo xesha apho i Uyakwazi ukuhlawula nge-Apple Watch, i-iPhone okanye ngeMac yethu.
Ukhuseleko olugqithisileyo lwenkonzo kunye nokusebenza kakuhle kweApple Pay kuyakwazi ukungaziboni ezinye iinkonzo ezifanayo ezisinikwa ziibhanki, nkqu nezo nkonzo zolu khuphiswano ithiyori ifana ncam neApple Pay, kodwa akukho mntu uyisebenzisayo. Nokuba sijonga ilizwe lethu ngamanani abasebenzisi abanezixhobo I-Android kwaye banokusebenzisa i-Android Pay okanye i-Samsung PayInkonzo yentlawulo ka-Apple iyaqhubeka nokuphumelela.
Usekela-Mongameli we-Apple Pay uJennifer Bailey ubhengeza ukuba iApple Pay likamva lokuthenga yonke imihla. Oku kongezwe kwinkonzo entsha yokuhlawula ngokusetyenziswa kwemiyalezo, iApple yokuhlawula ikheshi, Cebisa ukuba iApple iyakuthatha lonke eli candelo lentengiso yakuba iqale inkonzo kwihlabathi liphela. Kuyinyani ukuba maninzi amazwe abandakanya iUnited States, engenabo abafundi abahambelana nonxibelelwano, kodwa inyani kukuba xa bedibana, iApple Pay yeyona ndlela isetyenziswayo yokuhlawula. Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo eSpain wajoyina ICaixBank kunye ne-imaginbank, ekupheleni konyaka iyakuba yi-N26 kwaye uluhlu lweebhanki kunye namashishini luyaqhubeka ukwanda mihla le.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple Pay igubungela iipesenti ezingama-90 zeentlawulo ezenziwe ngaphandle konxibelelwano